झन् बलियो बन्दै देउवा | DNFMEDIA
झन् बलियो बन्दै देउवा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्चश्व झन् बढ्ने भएको छ । मत परिणाम अनुसार देउवा पक्षकै बाहुल्यता रहेकाले देउवाले पार्टीलाई अब कसरी अघि बढाउलान् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
देउवालाई यसपालि जसरी भए पनि सभापतिमा हराउनुपर्छ भनेर लागेका कांग्रेसका नेताहरुको लक्ष्य अपूरो भएको छ । सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका देउवाले पदाधिकारीमा बहुमत बनाएका छन् । देउवाले यसअघिको कार्याकालमा राम्रो काम गर्न नसकेको, पार्टीलाई कमजोर बनाएर यो अवस्थामा पु¥याएको भनेर आरोप लगाउँदै आइए पनि देउवाको इन्ट्रीले विशेष गरी कोइराला परिवारको साख गिरेको छ ।
देउवाको यो जितलाई लिएर उनी पक्षधर उत्साहित भएका छन् भने अर्को पक्षकाले देउवाले यो अवस्थामा पार्टी चलाउन नसक्ने भनेर भन्दै आएका छन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा पनि सुविधाजनक बहुमत ल्याएका देउवाको लागि अबको नेतृत्व अवसरसँगै चुनौतीको चाङमा छ । देउवाले सही ढंगले पार्टी हाँक्न सके उनी इतिहासमा लेखिन्छन् तर पुरानै गतिविधि नसच्याए त्यसको पनि कुनै दिन मूल्यांकन हुने नै छ । यसअघि ६० र ४० को भागबण्डामा रुमलिँदै आएको कांग्रेसमा आफूले भाग नखोज्ने देउवासँग सभापतिमा पराजित नेता शेखर कोइरालाले स्पष्ट पारिसकेका छन् । कोइरालाले पार्टी संगठनलाई विस्तार गर्नु आफ्नो एकमात्र एजेण्डा भएको बताएका छन् । देउवा पार्टीको विधान अनुसार अर्कोपटक सभापतिको उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले पनि उनी थप संकटमा छन् । कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा गुट पनि तितरवितर भएको छ । अन्तिममा टिकट नपाउँदा अर्को समूहसँग जाने रोग बढेको छ । देउवाले महामन्त्रीको टिकट नदिएपछि बाध्य भएर विश्वप्रकाश शर्माले प्रकाशमान सिंहको समूह रोज्नुपरेको थियो । शर्माले महामन्त्री जिते । कोइराला परिवारले कांग्रेस आफ्नै विर्ता हो जस्तो सोचिरहेको बेला कोइरालाकै छोरा शेखर कोइराला सभापतिमा पराजित भएपछि कांग्रेस अब साँँच्चै कोइरालाको हातबाट फुस्किएको हो कि भनेर भन्ने बेला भएको छ । शेखर कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका भतिजा हुन् । शेखरले सभापति जित्न अनेक प्रयत्न गरे पनि देउवाको अगाडि उनको केही लागेन । कांग्रेसको विधानमा सभापतिमा निर्वाचित हुन खसेको सदर मतको ५० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ पहिलो चरणमा कसैको पनि यो प्रतिशत पुगेन । दोस्रो चरणमा गए देउवा सभापति हुने सम्भावना नै छैन भनेर अनुमान लगाइरहेको बेला दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदा पनि शेखरले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिन सकेनन् । कोइराला परिवारमा सुरुदेखि नै सभापतिको उम्मेदवार को हुने भन्ने विषयले आन्तरिक कलह मच्चिएको थियो । शेखर र बीपीका छोरा निवर्तमान महामन्त्री सशांक कोइराला प्रतिष्पर्धामा थिए । उनीहरु दुबैजना अघि बढेपछि एकले अर्कालाई स्विकार्ने अवस्था नभएकाले नै देउवालाई पनि चिठ्ठा परेको हो । गिरीजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता अन्तिममा गएर प्रकाशमान सिंहको समूहबाट उपसभापतिको उम्मेदवार बनिन् । यसले गर्दा पनि कोइरालाबीच एकमत रहेनछ भन्ने गलत सन्देश दियो ।
पदाधिकारीमा भन्दा पनि केन्द्रीय सदस्यमा देउवा पक्षका अधिकांश जितेका छन् । सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री र ८ सहमहामन्त्रीसहित १३ मध्ये देउवा पक्षधर ८ जना जितेका छन् । देउवा समूहबाट सभापति, १ उपसभापति र ६ सहमहामन्त्री गरी ८ पदाधिकारी विजयी भए । डा. शेखर कोइराला समूहबाट १ उपसभापति, १ महामन्त्री र २ सहमहामन्त्री गरी ४ जना विजयी भए । प्रकाशमान सिंह समूहबाट १ महामन्त्री विजयी भए । नेपाली काँग्रेसको खुल्लातर्फको ३५ केन्द्रीय सदस्यमा देउवा पक्षका २४ जना निर्वाचित भएका छन् । डा. शेखर कोइराला पक्षका १० र १ जना तटस्थ निर्वाचित भए । सशांक कोइराला सबै प्यानलमा अटाएँ । सबै सभापतिका उम्मेदवारले उनको नाम राखिदिएपछि उनको ३८ सय ३६ मत आयो । निवर्तमान निर्वाचित महामन्त्री उनी यसअघि सभापतिको उम्मेदवार भन्दै हिँडेका थिए ।
देउवाले मधेशमा आफूलाई प्रभावशाली बनाएका छन् । मधेशी कोटाको महिलातर्फको ४ सिट केन्द्रीय सदस्यमा देउवा पक्षले ‘क्लिन स्वीप’ गरेको छ । ५ सिटको मधेशी खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा चन्द्रमोहन यादवबाहेक ४ जना देउवा पक्षबाट जितेका छन् । कोइराला परिवारको प्रभाव क्षेत्र प्रदेश १ को केन्द्रीय सदस्यमा २ जना देउवा पक्षका जितेका छन् । राजीव कोइराला मात्र कोइराला पक्षका छन् ।
प्रदेश २ अन्तर्गतको केन्द्रीय सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजाल निर्विरोध निर्वाचित भए । चित्रलेखा यादव प्रदेश २ को महिलातर्फ निर्वाचित भइन् । प्रदेश २ बाट जित्ने तिनैजना देउवा समूहका हुन् ।
पदाधिकारीमा को कता ?
सभापति, शेरबहादुर देउवा
उपसभापति, पूर्णबहादुर खड्का
सहमहामन्त्री, किशोरसिंह राठौर
सहमहामन्त्री, उमाकान्त चौधरी
सहमहामन्त्री, महेन्द्र यादव
सहमहामन्त्री, फर्मूल्लाहा मन्सुर
सहमहामन्त्री, भीष्मराज आङदम्बे
सहमहामन्त्री, महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)
उपसभापति, धनराज गुरुङ
महामन्त्री, गगन थापा
सहमहामन्त्री, बद्री पाण्डे
सहमहामन्त्री, जीवन परियार
प्रकाशमान सिंह समूह– १
महामन्त्री, विश्वप्रकाश शर्मा
केन्द्रीय सदस्यमा खुल्लातर्फ को कता ?
डा. गोपाल दहित
शेखर कोइराला पक्ष–१०
डा. सशांक कोइराला
केन्द्रीय सदस्य प्रदेश र समावेशीतर्फ
लामो समयदेखि टिम भन्दै हिँडेका र अहिले उम्मेदवार बन्ने क्रममा टिममा नपरेकाहरु भने दुवै समूहको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । सभापतिमा ३ सय ७१ मत ल्याएका प्रकाशमान सिंहले पदाधिकारीमा नै उम्मेदवार पाएनन् । उनले सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीको मात्र उम्मेदवारी दिएर गुटको अस्तित्वमात्र बचाए । सिंह, विमलेन्द्र निधि र सशांक कोइरालाले एक भएर जाने भनेर सुरुदेखि नै भन्दै आए पनि अन्तिममा साझा उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा देउवालाई फाइदा भएको छ । सभापतिको दोस्रो चरणको मतदानमा पनि सभापतिको पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो भएका शेखर कोइरालाले सिंह र निधिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नु नै देउवाको जितको प्रमुख कारण हो । सुरुदेखि नै देउवालाई हराउने भन्दै आए पनि किन अन्तिम समयमा एकमत हुन सकेनन् भन्न प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
Previous: एम्सीसीका कारण सत्ता गठबन्धन नै खतरामा
Next: ‘अमर बान्तु काव्य साँझ’ सम्पन्न